I-Tronsmart yethula okunikezwayo okukhethekile ngoNovemba 11 no-12 okufika kokungu-70% | Izindaba Zegajethi
I-Tronsmart, ifemu eyisingcweti yomsindo eya ngokuya ingena emakethe emnandi efana nomsindo okungenantambo enazo zonke izinhlobo zezinye izindlela. Sisanda kuhlaziya eminye yemikhiqizo yabo ethakazelisa kakhulu futhi sikubonise yona ukuze uthole umbono wekhwalithi nokusebenza kwayo.
I-Tronsmart imemezela izinsuku ezimbili zamadili aphambili ngoNovemba 11 no-12 lapho ungathenga khona amadivayisi abo angcono kakhulu ngezaphulelo ezingafika kumaphesenti angamashumi amahlanu. Zitholele nathi ukuthi lokhu okunikezwayo okuthokozisayo kuyini, ungaphuthelwa, futhi usebenzise kakhulu izaphulelo ezizokwenzeka ku-AliExpress.
Uma ufuna ukubona yonke iminikelo yomkhiqizo we-Tronsmart, ungafinyelela izinyuso ezinomkhawulo ngokwenza chofoza lapha.
Ngokwesibonelo, ama-headphone I-Tronsmart Onyx Prime ezinomsindo wokucaca okuphezulu sibonga iphrosesa ye-Qualcomm QCC3040 kanye ne-aptX codec inikeza nge-Bluetooth 5.2 umuzwa womsindo wekhwalithi ephezulu onamahora angaphezu kwamashumi amane okuzimela (okuhlanganisa nezindleko ezenziwe nekesi): Lawa ma-headphone, anenani elijwayelekile lama-euro angama-107,20, azobiza ama-euro angama-53,50 kuphela ku-AliExpress. ngesikhathi se-Tronsmart super deals, okuyisaphulelo esingaphezu kuka-50%. Ungawathenga khona manje kusuka lapha.
Okunikezwayo okuningi kuzogxila kuma-headphone ngoNovemba 11, lapho sizobona i-debut ye-Apollo Air, amadivayisi anokukhanselwa komsindo osebenzayo okuxubile ofinyelela ku-35 dB esewonke ngamabanga ahlukene. Zinokukhanselwa kwe-cVc 8.0 okusebenzayo okukuvumela ukuthi ugxile kwikhwalithi yomculo ngaphandle kokuphazamiseka kwangaphandle, ngaleyo ndlela ukhiqize ukuhlukaniswa okucishe kuphelele. Lokhu kuyathakazelisa ikakhulukazi kubagibeli bamabhayisikili nabagijimi njengoba bazokwenza imizila yabo begxile kulokho abakuthakaselayo kakhulu, ukujima. Kulokhu, i-Tronsmart Apollo Air enenani elingama-euro angama-70, izobiza ama-euro angama-37,81 kuphela., isaphulelo sangempela esisondele kumaphesenti angu-60 ongase ungafuni ukusigeja futhi ongasisebenzisa ngokunenzuzo chofoza lapha.
Ngaleso sikhathi, imodeli ye-Onyx Ace, i-semi-in-ear headphones yalabo abangazivumelanisi namamodeli we-intra-aural, iphinde inikeze izaphulelo ezithokozisayo kulawa ma-Tronsmart Super Deals ku-AliExpress, ithola lawa ma-headphone anohlelo lomshayeli lwemakrofoni emine. izinga eliphezulu kanye nephrosesa ye-Qualcomm ukuze inikeze ikhwalithi engcono kakhulu ngokwemibandela yomsindo.
Laba banesaphulelo esibalulekile esingu-57%, izobiza kuphela ama-euro angama-24,70 kule ntengo yokuphromotha ye-AliExpress. Ungakwazi ukufinyelela okunikezwayo ngokuchofoza lapha. Intengo ephansi impela ye-True Wireless earbud okunzima ukuyithola uma ucabangela iziqinisekiso zekhwalithi ezinikezwa yi-Tronsmart.
Kodwa akuyona yonke into ezoba ngama-headphones, kukhona nembobo yezikhulumi, kuqalwa ngenye yezinhlobo zayo ezigqama kakhulu, i- I-Mega Pro, idivayisi enezinhlobo ezintathu zokulinganisa ezihlukene ngenkinobho eyodwa. Ivumela ukubhanqa ngohlelo lwayo lokuxhumana oluthuthukisiwe futhi sinamandla afinyelela ku-120W ngekhono lokunikeza umsindo we-3D obonakalayo. Kulokhu sijabulela isaphulelo esingu-30%, ngakho sizohlala kuma-euro angama-81,04 kuphela, ithuba elihle kakhulu ongakwazi sizakala lapha.
Ukunikezwa kokugcina hhayi ngenxa yaleso sizathu okungathakazelisi kakhulu isipikha I-Splash 1, enabashayeli ababili kanye nerediyetha engenzi lutho ukunikeza ukusebenza okuhle ngesistimu yayo ye-stereo engu-15W yamandla aphelele ngohlelo lwe-DSP olunelungelo lobunikazi, okusenza sithole ukulingana okuhle namathoni ahlukene ukuze sinikeze umuzwa ongcono kakhulu womsindo ngisho nasezikhaleni ezinkulu, ngakho-ke, ngenxa yamandla ayo okumelana nayo ingaba umngane omuhle wokuvakasha kuwo wonke amaphathi ethu, manje ngesaphulelo esingu-35% izohlala kuphela kuma-euro angama-23,58 ukufinyelela leli khasi lokunikezwayo.
Zuza ngokugcwele ama-Super Deals e-Tronsmart ku-AliExpress futhi ungaphuthelwa yithuba lokuthola imikhiqizo yomsindo ehamba phambili.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Tronsmart yethula okunikezwayo okukhethekile ngoNovemba 11 no-12 okufika ku-70%
I-Soundcore Liberty 3 Pro iyindlela entsha ene-ANC nencazelo ephezulu